काङ्ग्रेस नेताको आडमा मोरङ फर्किने ‘गुन्डा नाइके’ अभिषेक गिरीको दाउ ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
काङ्ग्रेस नेताको आडमा मोरङ फर्किने ‘गुन्डा नाइके’ अभिषेक गिरीको दाउ !
विराटनगरको हाटखोलास्थित जिल्ला कारागार मोरङमा हाल नौ सय ५८ कैदीबन्दी छन् । जबकि मोरङ कारागारको क्षमता दुई सय ५० जनाको मात्रै हो । अहिले झन्डै चार गुणा बढी कैदी बन्दीलाई कोचाकोच गरेर राखिएको उक्त कारागार पछिल्लो समय ‘गुन्डा नाइके’ अभिषेक गिरीका कारण आतङ्कित छ ।
मोरङका कारागारबाट सरुवा भइ काठमाडौँको डिल्ली बजार कारागार पुगेका उनी पुनः मोरङ नै आउने अडानमा छन् । तर कारागारभित्र र कारागारबाहिर गिरीविरुद्ध नाराबाजी धर्ना हुन थालेपछि उनी मोरङ आउँदा–आउँदै फर्किएर सप्तरी कारागारमा पुगेका छन् । तर सप्तरीबाट पनि मोरङ कारागार हल्लाइरहेका छन्, आतङ्क मच्चाइ रहेका छन् ।
यता, कारागारमा भएकामध्ये नौ सय जना कैदी गिरीको विपक्षमा अडिग छन् । शुक्रबार उनका विपक्षमा देखिएका नौ सय कैदीले गिरीलाई मोरङ ल्याउन नहुनेभन्दै हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए । कारागारका निमित्त जेलर रामप्रसाद पोखरेलले उक्त पत्र आफूमार्फत हुँदै कारागार विभागमा बुझाइएको बताउँछन् ।
यस्तै, उनलाई मोरङ कारागार फर्काउन नहुने भन्दै कैदीबन्दीका आफन्त धर्नामा बस्दै आएका छन् । उसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गिरीको समर्थनमा कारागारको गेटमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने काङ्ग्रेसका नेताहरू उनलाई मोरङ फर्काउन हात धोएर लागिपरेका छन् । गिरीकै समर्थनमा मोरङ कारागारअगाडि दिनहुँ प्रदर्शन हुन थालेको छ । काङ्ग्रेस विराटनगर सहसचिव सचिन पोखरेलको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले आइतबार र सोमबार प्रदर्शन गरेका थिए । तथापि, पोखरेलले भने गिरीको समर्थनमा प्रदर्शन नगरिएको दाबी गर्दै कारागारभित्र सुधारको आवश्यकता रहेकाकारण आन्दोलन थालिएको बताए ।
यता, मोरङ कारगार प्रमुखका रूपमा सोमबार साँझमात्र विरानटगर आएका महेन्द्र खड्काले आफू आउँदा प्रदर्शन भइरहेको बताउँदै यसबारे बुझ्ने बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएर समस्या भइरहेको अवस्थामा अहिले गिरीको पक्ष–विपक्षमा प्रदर्शन भइरहेको देखियो’, उनले केटिएम दैनिकसँग भने, ‘चाँडै नै समस्याको समाधान हुन्छ । यस्तो विवादका बेला गिरीलाई मोरङ फर्काउनु ठिक होइन ।’
नामुद अपराधी गिरी मोरङ कारागार आउन बल गरिरहँदा कैदी बन्दीले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । सरकारकै नेतृत्व गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको दबाब र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको ठाडो निर्देशनमा गिरीलाई काठमाडौँको डिल्ली बजार कारागारबाट गत भदौ १६ गते ‘सुटुक्क’ विराटनगर ल्याइएको थियो । तर उनलाई गेटभित्र छिर्नै नदिनेगरी कैदी र उनीहरूका आफन्त प्रदर्शनमा उत्रिएपछि स्कर्टिङ गरी गिरीलाई सप्तरी पु¥याइएको थियो । तर कारागारभित्र र बाहिरको अवस्था ठिक भएसँगै उनलाई विराटनगर फर्काउने काङ्ग्रेस नेता र कारागार प्रशासनको अडान रहेको स्रोत बताउँछ ।